Sihlaziya ukwesekwa kwe-iPhone ne-Apple Watch kusuka ku-Oittm | Izindaba zamagajethi
Sihlaziya ukwesekwa kuka-Oittm kwe-iPhone ne-Apple Watch
Amagajethi ayisizathu sale webhusayithi yethu, yingakho ngezikhathi ezithile sithanda ukukulethela imikhiqizo eminingi engenza impilo yakho ibe lula, noma okungenani ikhululeke kakhudlwana. Lesi sikhathi sizokhuluma ngomkhiqizo ohloselwe labo basebenzisi abane-Apple Watch ne-iPhone noma i-iPad. Futhi ukuthi i-Apple ayifaki nalawa madivayisi isisekelo sokushaja esiba lusizo olukhulu lapho womabili amadivayisi eyimpahla yethu. Namuhla sizokhuluma ngesisekelo sokushaja se-Oittm se-iPhone ne-Apple Watch.
Lawa magajethi amancane angahlala njalo esinikeza induduzo eyengeziwe, noma kunjalo, imvamisa eshibhile iyabiza, yingakho kubalulekile ukuthi Ku-Actualidad Gadget siyakukhumbula ngenxa yezibuyekezo zethu ezihlose ikhwalithi yezingxenye zayo futhi uma beletha ngempela lokho abakuthembisayo.
Njengenjwayelo, sizobheka izici ezifanele kunazo zonke okufanele sizicabangele ekubuyekezeni, kusuka endleleni izinto zayo ezihlanganiswe ngayo, kuya ekwakhiweni nasezingeni lazo. Kepha okubaluleke kakhulu ezimweni eziningi ukuthi usinikeza insiza ngendlela efanele, Lesi sisekelo sokushaja se-Oittm sinokusetshenziswa okungaphezu kokukodwa, futhi sifuna ukuba ngaphezulu kakhulu kokuhlobisa ku-nightstand yethu. Uyazi, uma ufuna ukuya ngqo kumaphoyinti athakazelisayo, sebenzisa kakhulu inkomba yethu.
1 Idizayini nezinto zokwenziwa kwesisekelo se-Oittm LOPOO
2 Ukuhlangana nokusebenza
4 Izinzuzo nokuqeda
5 Isipiliyoni somsebenzisi nezintengo
Idizayini nezinto zokwenziwa kwesisekelo se-Oittm LOPOO
Kwa-Oittm, into okufanele ikhunjulwe ukuthi bazama ukuhlanganisa ngokuphelele imikhiqizo yabo nemiklamo nemibala inkampani yeCupertino uqobo esinikeza yona. Ngalokhu sisho ukuthi bayazi ukuthi bangahlanganisa kanjani iphalethi lemibala yabo nezinto zabo ngendlela yokuthi bangaphumi esikimini futhi basinikeze umuzwa wokuqhubeka., siyabona ukuthi kusuka kuma-silicone kuye kuma-plastiki kuklanywe futhi kuhlanganiswe ngokuphelele nokwakhiwa kwamadivayisi ethu. Kuyiqiniso ukuthi sithola izisekelo eziningi ezakhiwe ngama-silicone, i-aluminium kanye namapulasitiki, kepha lapha ngeke sithole imikhiqizo eyisisekelo, konke kunombala, ukwakheka nokuma umuntu angakulindela kumkhiqizo owenzelwe ukuhlangana nemvelo ye-Apple, futhi lokho kuthakazelelwa kakhulu.
Isisekelo sikhulu futhi siphezulu, kepha asenele ukuthi singacasula, akukho okunye okuqhubekayo kusuka eqinisweni, sikunika ukuzinza okungeziwe okuzosivumela ukuthi sishiye amadivayisi ethu eqinile ngaphandle kokwesaba, into engingakwazi ukuyisho ngezinye izisekelo eziningi bekulokhu kuvivinywa. FUTHIn Sizozithola sinamasentimitha angu-3,75 ukuphakama namasentimitha angama-20 ubude, kunesikhala esiningi sedivayisi yethu ngaphandle kokuba hulk. Mhlawumbe kuyiqiniso ukuthi ingaba yinde kancane, kepha inamandla ayo ajwayelekile, okuletha ukuqonda ekuphakameni kwayo.
Isisekelo sakhiwe nge-aluminium efanayo nombala onikezwa yi-Apple, kanye nokuxhaswa kwangemuva kwe-iPhone. Okwamanje, ingxenye ephezulu lapho amadivayisi atholakala khona yipulasitiki emhlophe, ngokuhambisana namadivayisi ethu Silver kusuka ku-Apple, kepha futhi sinenhlanganisela Isikhala Esimpunga. Ine-altare le-iPhone lapho kuvela khona ikhebula le-Lightning, elinokuvikelwa kwenjoloba okumpunga kwethoni efanayo nezintambo ezisemthethweni ze-Apple futhi izovikela phansi kwe-iPhone yethu kunoma yikuphi ukuklwebheka. Ngakolunye uhlangothi, umqhele lapho sizoshumeka khona ishaja ye-Apple Watch umbozwe ngokuphelele ngaphakathi futhi uzohlala usesimweni esinqunyiwe futhi esihlala njalo esizosivumela ukuthi sisebenzise i-Apple Watch kumodi. itafula eliseceleni kombhede.
Siqala ngomhlangano, ngoba ichweba lihlukaniswe ngokuphelele. Kodwa-ke, ukulandela imiyalo ngezinyathelo ezine nje uzoba nakho ukuthi kungasebenza. Ikhava elimhlophe elingaphezulu lihlukaniswe nesisekelo se-aluminium futhi lapho sizothola izinkomba zezintambo. Ngokwengqondo le mihlahlandlela inezibambo ezingalimaza ikhebula lakho elisemthethweni le-Apple, ngakho-ke ngincoma ukuthi liphoqelelwe ukuthi livulwe ngaphambi kokufaka ikhebula le-Lightning ngalo. Sizoba nomgodi ngaphakathi lapho sizofaka kahle khona ikhebula le-Apple Watch nokuxhuma kwangaphakathi kwe-USB okuyosivumela ukuthi sibeke lezi zintambo ngaphakathi ngaphandle kokungena endleleni. Ngokususa izintambo ngokusebenzisa iziqondisi bese ufaka ukuxhumana kwazo ngamamojula asuswayo we-iPhone ne-Apple Watch, konke kuzokwenziwa, ukubeka ukuphumula kwe-iPhone kufanele sivele sisebenzise indlela yokuphrinta.
Sesivele sikubekile, kepha akusikho konke, ngemuva sithola ukuxhumeka kwamandla okujwayelekile ngekhebula lokuxhumeka kwenethiwekhi elifakiwe, elihambisana nokuxhumeka kwe-USB okune-amperage eyanele (2.1A) ukushaja amadivayisi afana ne-iPad, ngakho-ke ngaphandle kwezinkinga uzoba namashaja amahlanu ngamandla owodwa futhi amahle kakhulu. Kungakho lesi sizinda sokushaja se-Oittm siyisiteshi esiphelele esizosinikeza okusetshenziswayo okuningi kakhulu kunalokho obekulindelekile. Ama-USB amathathu angemuva ahambisana nanoma yiluphi uhlelo lokushaja lwe-USB, ngeke kudingeke ukuthi sikhokhise noma iyiphi idivayisi ye-Apple ngayo. Kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi lesi sisekelo sokushaja asizi nanoma yiziphi izintambo zokushaja ngaphandle kwamandla alo, ngakho-ke kufanele usebenzise izintambo zakho. Kuyinkinga uma unezinto ezijwayelekile kuphela, ngoba lapho usohambweni kuzofanele uzisuse, yize uhlelo lokufaka ikhebula lushesha futhi lusebenza kahle, luyaziswa, hhayi njengezinye izisekelo engizizamile ezisikiwe ngisho.
Isisekelo sokushaja se-Oittm (Buka ne-iPhone)
Umhlahlandlela wekhebula uqinile kakhulu
Isipiliyoni somsebenzisi nezintengo
Okuhlangenwe nakho kwami ​​komsebenzisi kube kuhle impela, ngikhokhisa i-Apple Watch yami ne-iPhone yami nsuku zonke., ngenkathi ngisebenzisa okunye ukuxhumana kwayo kwangemuva ukushaja i-iPad ngezikhathi ezithile. Kukufanele ukuthi ube isisekelo sakho sokushaja esivamile, ngoba ngeke uswele ukusebenza. Njengephuzu elibi ngigcizelela udaba lokungafaki ikhebula lokushaja, yize lelo nani futhi kucatshangelwa imikhawulo i-Apple evame ukuba nayo ngezintambo, cishe okungcono. Ngamafuphi, isisekelo sokushaja okufanele ngisincome, yize inani laso lingase liphansi ngokusobala.
Ungathola isisekelo sokushaja se-Apple Watch ne-iPhone kusuka ku-Oittm e-Amazon kusuka kuma-euro angu-34,99 kuye phambili Lesi sixhumanisi. Kodwa-ke, uma usebenzisa amakhodi esaphulelo alandelayo uzokwazi ukujabulela umkhiqizo ngentengo emangalisa impela, futhi njengesipho uzothola i-PC case ye-Apple Watch:
Ikhodi elandelayo othola ngayo ifayela le- Intengo yokugcina engu- € 27,99 : R8S9NOK6 (-20%)
Ikhodi yesipho sekhava: 9IVWHNNT
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Sihlaziya ukwesekwa kuka-Oittm kwe-iPhone ne-Apple Watch
Amawashi we-GPS aneziqaphi zokushaya kwenhliziyo